December 2018 | Save A tareenka
dhawaaqa whooshing of tareen barbaro galeen saldhiga a, iyo suurto gal ah lagaa on iyo kuwii tegayay meel gebi ahaanba aan la filayn. Ma xasuusan kartaa wax ka khayr badan Wadooyinka oo caan ku Historical tareenka? Tareenadu waa waanada of Age Golden ee safarka. When people…
Are you planning for the upcoming summer holidays and thinking of the itinerary? Haddii aad Boogaadin habka kharash ah oo wax ku ool u ah safarka soo socda tareenka, safarka on tareenka badbaadin kartaa lacagtaada si fudud. Intaa waxaa dheer, haddii aad u tagto tareen kursiga jaale hore,…
Tareenadu waa sida ugu fiican ee ay u safraan dalka Talyaaniga iyadoo aan loo eegin xilli. Si kastaba ha ahaatee, waxay muujinayaan in ay fursad u ammaan iyo raaxo badan, gaar ahaan inta lagu jiro xilliga qaboobaha. Winter safarka tareenka ee Italy ammaan ma aha oo kaliya, laakiin waxa ay sidoo kale si degdeg ah oo hufan. This article was…
Runtii ma jiro meel ka fiican oo lagu jeclaado oo ka doorbidid Goobaha Malabka ee Yurub. Fudayd ee safarka tareenka, waxaad booqan kartaa tan oo dalal qurux on your Malabka. Iyada oo fara badan qorraxda, talgaley qurux badan, canab ah, oo aan dhammaanayn hotel iyo makhaayad fursadaha taataabtay, waxaa…
Haddii aad tahay nin socoto ah by wadnaha, Annagu waxaannu nahay quruxsan Hubi in aad had iyo jeer raadiyo kharashka habka ugu hufan ee tayaasha raacid tareenka aad. Haddii aad tahay buff casriga a, you might be aware of the fact that now you can book your…
Taas oo meel ka wanaagsan in ay ku raaxaystaan ​​pizza badan dalka in ay soo hindiseen, xaq u? jacaylka Talyaaniga, jeclahay, jecel this hadhuudhka fudud-jeestay delicious! No dheriwadaag yaab in Italy waxaa qaab saafi ah oo farshaxanka jeestay, oo waxaa ugu dambeyntii UNESCO-ansixiyey! Barqiyey agagaarka Italy, you’ll find pizzerias opened in…
Haddii aad tahay qofka socotada Solo iyo aad jeceshahay si ay u tababaraan safarka sida miyiga ah, ka dibna aad tahay meel sax ah. safarka tareenka waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee ay u safraan iyada oo Europe haddii aad rabto in ay la kulmaan wax kasta oo Europe leeyahay in ay bixiyaan. Noqo…
lover kasta oo khamri run ogyahay in magaalooyinka khamri Yurub bixiyaan khamri la awoodi karo oo la yaab leh. From France Italy, oo dheeraad ah, dalalkaas waxaa loo aqoonsaday by badan oo ay leeyihiin raagay ugu fiican adduunka. In ka qayb, this is due to the ideal climate growing…
noocaas ahi The on tareen oo ay kasoo horjeeddo baska ee Europe waa mawduuc aan dhamaanayn, qof kasta uu helay ay opinion gaar ah oo ku saabsan. laakiin, aan xitaa hadalka ku saabsan ammaanka, oo haddii aynu nahay - oo ku filan waa? Ammaanka gaadiidka our doortay waa in had iyo jeer inuu horta yimaado, and we’re addressing…